सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने, कहिले खुल्छन् गाडी ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने, कहिले खुल्छन् गाडी ?
काठमाडौ । महामारीका कारण लागू गरिएको निषेधाज्ञा अझै पनि जारी छ । सार्वजनिक सवारी साधन संचालन भएका छैनन् । सार्वजनिक सवारी संचालन नहुँदै त्यसो भाडा भने बढाउनुपर्ने निष्कर्ष सरकारी निकायले निकालेको छ ।